Khin Maung Chin: လမင်းကြီးရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာ
"Love to someone " is looks like " watching moon".
We can always see one side.
The other side may or may not the same.
The one that u see and no one can't predict
what's on the other. hello! my KinG, i really
wanna know what's on the other side of you beyond me!
အခန့်မသင့်ခဲ့ရင်အားပေး(ဆဲဆို)သွားနိုင်ပါကြောင်း :P :P :P
သီချင်းလေးကို Youtube မှရယူပါတယ်
Aug 30, 2011, 4:49:00 AM
ချင်းလေးရေ . . လွမ်းနေရသူဆိုရင်တော့ . . ကျုပ်နဲ့ မိတ်ဆွေလုပ်လို့ရပီ . . . လွမ်းနေရင် နာကျင်နေရင် ဘာမှ မလုပ်နဲ့ . . စာသားလေး အဖြစ်ပြောင်းပြီး စာမျက်နှာပေါ် သွန်ချလိုက်ပါ . . .
Aug 30, 2011, 5:26:00 AM
တကယ်ရီး လွမ်းနေတာပဲ... ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ ရေးထားတာလေးကို ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ဖတ်သွားပါတယ်..
အစ်ကို့ကလေးလေးနဲ့လည်း မြန်မြန်ပြန်ဆုံပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နော်.. :D
Aug 30, 2011, 9:14:00 AM
ဟုတ်တယ်..ချင်းလေး...ကလေးလေး မရှိရင်တောင်မှ အလိုလိုလွမ်းတတ်နေပြီး...အဝေးရောက် ဘဝတူမို့ ခံစားသွားပါတယ်....
Aug 30, 2011, 12:46:00 PM
အလွမ်းဘ၀ မှ မြန်မြန်ကျွတ်ပါစေ...
Aug 30, 2011, 4:06:00 PM
ဟယ်တော့ အစ်ကိုချင်းတစ်ယောက် တစ်ကယ်လွမ်းနေတာ ... ချစ်မိရင် ဒီလိုပဲ ကိုချင်းရေ ဖွင့်ပြောလိုက်လေ.. ကလေးလေးလဲ ကိုချင်းကို တိတ်တိတ်လေး ချစ်နေလားမှ မသိနိုင်တာနော်....
Aug 30, 2011, 6:02:00 PM
>ကိုလင်းခေတ်မိတ်ဆွေတော့ဖြစ်သွားကြပြီ..ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်း တို့ထုံးစံအတိုင်းအစ်ကိုအကြံပေးသလိုလုပ်ပါတော့မယ်ဗျာ..။ >ညီမကန်ဒီလေးပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါရစေနော်..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမ။ >ကိုဇက်ဗီ..ဘဝတူတွေတဲ့လားဗျာ..တစ်ယောက်တိုးလာတာပေါ့နော်:P ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစ်ကို။
Aug 30, 2011, 6:15:00 PM
နို့ပေမယ့်ကော်ဖီကလွဲရင်ဘာမှမသောက်တတ်တော့မခက်ပေဘူးလားဗျာ:P ဆုတောင်းပေးတဲ့အတိုင်းဆုံဆည်းခွင့်ရဖို့နေ့နေ့ညညမျှော်လင့်လျက်ပါ။ အားလုံးကလူချင်းမသိကြပေမယ့်စိတ်ရင်းအမှန်တွေနဲ့မျှဝေခံစားပေးကြ တယ်ဆိုတာအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်မိလို့ကျေးဇူးအရမ်းတင်မိပါတယ်လို့ ထပ်ဆင့်ပြောပါရစေနော်...။
အစ်ကိုချင်းရဲ့ ဘလော့ကိုဖွင့်ဖွင့်ချင်း အလွမ်းတွေလျှံထွက်လာလို့ မနဲလိုက်သိမ်းလိုက်ရတယ်။ လက်စသတ်တော့ ငါ့အစ်ကို အရမ်းလွမ်းနေတာကိုး။
"ဘဝမှာဘာမှမသိခဲ့ဖူးပေမယ့်ချစ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာတော့သေချာတယ်" ဆိုတာလေးကတော့ဖြင့် အရမ်းကောင်းတာပဲဗျာ။
Sep 1, 2011, 7:24:00 PM
အဝေးရောက်ချစ်သူကိုမှ လွမ်းနေရသတဲ့လား မောင်ချင်းရေ....။။။
"အဝေးက ချစ်တယ်ဆိုတာ အလုပ်မလုပ်တဲ့ မီးခြစ်နဲ့ မီးညှိရသလိုပါဘဲ .. ကိုယ်ကလည်း အရမ်းသောက်ချင် သူကလည်းအလုပ်မလုပ်တော့ ခံတွင်းချဉ်ယုံသက်သက်ပါဘဲ ...."
တကယ်တော့ အဝေးကြီးက ချစ်ရတယ်ဆိုတာ လွမ်းနေဖို့ သက်သက်လေးပါပဲလေ။။
Sep 2, 2011, 9:10:00 AM
ချင်းလေးရေ လွမ်းနေတယ်ပေါ့လေ ..ဟုတ်လား မောင်လေး အတူတူလွမ်းကြမယ် အဖော်ရှိတယ် အားငယ်နဲ့ :)
Sep 2, 2011, 10:39:00 PM
လွမ်းတယ်ဆိုတာ တော်ရုံပါရမီနဲ့ လွမ်းလို့မရဘူး ချင်းကလေးရေ...လွမ်းတတ်တဲ့ နှလုံးသားက ရှိဦးမှ...လွမ်းစေတဲ့ အကြောင်းခံကလည်း ရှိဦးမှ...လွမ်းအောင်ဖန်မယ့် ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း ရှိဦးမှ လွမ်းလို့ရတာကလား...လွမ်းခွင့်ရတုန်း အားပါးတရသာလွမ်းထားပေတော့...ပြန်ဆုံကြတော့လည်း လွမ်းခဲ့သမျှ ဟာသတွေ ဆန်ချင်ဆန်သွားမှာပေါ့လေ...
Sep 2, 2011, 10:51:00 PM
ညီလေး8yarရေ..Thank you နော်ညီ..။ ကိုအလင်းသစ်....You are Right.ခုလိုရေးသွားခဲ့တာကျေးဇူးတင်တယ်အစ်ကို..။ မမအိန်ဂျယ်လ်....အလွမ်းမင်းသားဆိုပြီးနမီးကျယ်နေပါဦးမယ်. :Dမလုပ်ပါနဲ့ဗျာ...ကျေးဇူးနော်မမ။ ဆရာဟန်ကြည်ခင်ဗျာ..။ဆရာပြောသလိုနေ့တိုင်းအချိန်ရတိုင်း လွမ်းနေပါကြောင်းပါဗျာ..။ဆရာပြောသလိုပဲပြန်ဆုံရပါစေဆရာ။ ဟာသဆန်ချင်လို့ပါ..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ.. အားလုံးကိုလေးစားလျက်..။
အချစ်ပင်လယ်ကြောမှာ မျောပါမသွားဖို ပဲ့ကိုနိုင်နင်းစွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ပါစေကွယ်။